Vita fihavanana amin'Andriamanitra
"Ary ianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy, no efa nampihavaniny (nampihavanin'i Jesosy Kristy) ankehitriny tao amin'ny tenan'ny nofony, tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany." Kolosiana 1:21-22
Noho ny ota ao anatiny, ny olombelona dia mifanohitra amin'izay rehetra maha Andriamanitra an'Andriamanitra, dia fahazavana, fitiavana, ary fahamasinana. Tsy antsika mihitsy ireo toetra ireo! Ny Baiboly dia miresaka mazava momba ny toetra mahonena ananan'ny olombelona rehetra, manoloana an'Andriamanitra: "olon-ko azy", "fahavalo", miavaka noho ny "fanaovan-dratsy". Ny fanamelohany no hany sahaza antsika tsirairay.
Fa fantatrao ve fa tonga tety; an-tany Jesosy, Ilay Zanak'Andriamanitra, mba hampihavana antsika aminy? "Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany" (2 Korintiana 5:19). Mba hahatanteraka izany, dia tsy maintsy maty teo amin'ny hazofijaliana Izy, niaritra an-tsitrapo ny famaizana tokony ho antsika. Mahagaga ny mahita fa Jesosy, Izay tsy tompon'andraikitra velively amin'ny fikomiana ao amin'ny olombelona, dia naniry hanao izay rehetra azony natao mba hitondra antsika ho eo amin'Andriamanitra. Izy koa aza dia Andriamanitra, nahary izao rehetra misy izao, kanefa dia natao toy ny mpanao ratsy. Maty Izy mba hanamarinana olo-meloka. Izay olona mino sy mandray izany ho an'ny tenany dia vita fihavanana amin'Andriamanitra, manomboka hatreo.
Raha misy olona roa mamitram-pihavanana, amin'ny ankapobeny dia tokony ho samy mandray anjara amin'izany izy roa tonta. Fa eto, nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra, ary ny mandray izany no hany angatahiny amintsika. Ho an'ny olona, dia sarotra indraindray ny manadino ny anton'ny nifandirana. Andriamanitra kosa miteny hoe: "Ny fahotany sy ny helony tsy hotsarovako intsony" (Hebreo 10:17). Ao amin'i Kristy no ahitany ny mpino ankehitriny ho tsy manan-tsiny, tsy misy pentina, lavorary; ary izany dia noho ny nijalian'i Jesosy sy ny nahafatesany teo amin'ny hazofijaliana.